အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: June 2011
သရီး ရီးယား အီဗာလူးအေးရှင်း
ခဏတာ ခိုနားရာ ဌာနီ
၁၈ ရပ်ပညာ ငါစုံပေတော့မပေါ့
ဗေဒါကို ကဗျာတွေ ဘတ်ပေမယ့်
အော် ငါဟဲ့ ငါးခြောက်ပြား(အတည်ရေးတဲအခါ ယောက်ျားလို့သုံးပါမည်)
ဘဝဒဏ်ကိုလဲ ငါ ဂရုမပြု
နင့် မမှု လို့ အော်ဟစ်မြည်ကြွေး
လေယာဉ်စောင့်ရင်း ပျင်းပျင်းနဲ့ စိတ်ထဲပေါ်လာရာလေးတွေ ဟိုခြစ်သည်ခြစ်...
ဘာလိုလိုနဲ့ ၃ နှစ်ပြည့်တော့မည်
on the way back to Bangkok
Posted by တီချမ်း at 9:05 AM6comments: Links to this post
Labels: ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ, တီတီချမ်း
ဆူညံ ပူညံ လဲ မဖြစ်သလိုပဲ
အခု အာဆီယံ ထဲကနေ
ရွှေတွေ ဗီအိုအေ ရပြီ။
Posted by တီချမ်း at 10:34 AM5comments: Links to this post
Donation for positive orphan
အရင်တီ မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်လုပ်တုံးက အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့လေးပါ ခုတလော ပရောဂျက်တွေ ရပ်တာဘာညာကြောင့် အခက်တွေ့လို့ တင်ပြလာတာပါ။ တီ တို့ သူငယ်ချင်းတွေ စုလှု ကြဖို့ ရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားရင် စာဘတ်သူတွေလဲပါနိုင်ပါတယ်။ နောင်ဘဝ တီချမ်းကြီးနဲ့ ခုလိုပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေစက်ပါနိုင်ကြအောင်ပေါ့နော်။
Donation for the education of the positive orphans
“Kho Nar Yar” isacommunity based organisation providing social services in healthcare, educational assistance and looking after the positive and surviving orphans in North Oakkalapa Township with the support of local and international donors starting from 2005 and recently due to the suspension of the projects, the positive orphans encounter difficulties in their education for 2011 academic year. We are planning to collect contributions from family and friends who are interested in helping fulfill the needs of these children and would like to encourage anyone to contribute as much as you can.
School fees 5,000 Myanmar Kyats (USD 8 or THB 230)
Textbooks 3,000 Myanmar Kyats (USD5or THB 145)
School uniforms 5,000 Myanmar Kyats (USD 8 or THB 230)
Umbrellas and ponchos 3,000 Myanmar Kyats (USD5or THB 145)
Total 16,000 Myanmar Kyats (USD 26 or THB 750)
Recently, there are 45 children who are in need of these assistance materials and you may contribute either for5children or 10 children or as much as you want to donate alone or with friends.
Those who are interested in donating can contact Aung Myo at +66 (0) 84 671 1135
Addy Chen (aka) Aung Myo
084 671 1135
- Appeal for donation from Kho Nar Yar Safe house
- List of the children who are in need
ပေါ့စတစ် မိဘမဲ့ကလေးများ အတွက် ကျောင်းပညာရေးအလှု ပါဝင်နိုင်ရန် နိုးဆော်ခြင်း
“ခိုနားရာ” ပြည်တွင်းအခြေ စိုက် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ အလှုရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် မြောက် ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပေါ့စတစ်ဝေဒနာရှင်များနှင့် ကျန်ရစ်သူမိဘမဲ့ ကလေးများအား ကျန်းမာရေး၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး နှင့် ပညာရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးနေခဲ့ရာ လတ်တလော ပရောဂျက် ရပ်ဆိုင်းမှုများကြောင့် ပေါ့စတစ် မိဘမဲ့ ကလေးများ သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရပါ သည်။ သို့ပါ၍ ၄င်းကလေးများ အတွက် လိုအပ်ချက်များကို မိမိတို့ တတ်အားသ၍ သူငယ်ချင်းများစု၍ လှုဒါန်း ကြမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင်နိုင်ကြစေရန် နိူးဆော်ပါသည်။
ကျောင်းအပ်ခ ၅၀၀၀ ကျပ်
ဖတ်စာအုပ် ၃၀၀၀ ကျပ်
ကျောင်းဝတ်စုံ ၅၀၀၀ ကျပ်
ထီးနှင့် မိုးကာ ၃၀၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျပ်
လောလောဆယ် လိုအပ်လျက် ရှိသော ကလေးအရေအတွက်မှာ စုစုပေါင်း ၄၅ ဦးဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှ ကလေး ၅ ဦး ၁၀ ဦး မှသည် လှုဒါန်းနိုင်သကဲ့သို့ သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်းစုပေါင်း၍လည်း လှုဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများ စိတ်ပါဝင်စားလျှင် ကိုအောင်မျိုး (+၆၆) (၀) ၈၄ ၆၇၁ ၁၁၃၅ သုို့ ဆက်သွယ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Addy Chen (a) Aung Myo
ပုံ ကို ကလစ်ပြီး အကြီး ချဲ့ ကြည့်ပါ
Posted by တီချမ်း at 3:53 PM No comments: Links to this post
ဖြူ လိမ္မော် ပန်း နီ ခရမ်း ကယ်နဲ့
Street aside tea shop
Sulay and Anawyahtar Junction
ပုံတွေအကုန် တီရိုက်သည်။ ပုံတွေက ရိုက်ထားတာ ကြာပီ ကဗျာ က ရေးမယ် ရေးမယ် နဲ့ အင်စပရေးရှင်း က မရတာ တနေ့က ညကတော့ ဘုတ်ဆုံ နဲ့ ညဘက် ဓါတ်ပုံ ရုိုက် ထွက်ကြရင်း ခေါင်းထဲဝင်လာတာ နဲ့သူ့ဆီက ဘော့ပင် စာရွက်တောင်းပြီး ကောက်ခြစ်လိုက်တာ မိနစ်ပိုင်းပဲ ကြာတယ် ထွက်ချင်ရင်လဲ အဲ့လိုပဲ
အော် အဲ့ည က နန်းညီ မပါ သနားပါတယ် ညုန်းမ်
Posted by တီချမ်း at 10:42 PM6comments: Links to this post
Labels: ပန်းဖွဲ့ ကဗျာများ
Q and A with DL
Let me quote your sentences here are in bold. And my answer are in red.
“I do agree that we all have to protect ourself. (ourselves)
But we all must know the different between choice and responsibility.”
I think you misunderstand me here, by choice I mean, OK let me give u as my own example, I am HIV positive if I wish NOT to tell whoever I wish to have sex with that is my RIGHTS and whether I tell him or not is my choice.
And responsibility is even clearer, is my responsibility to protect myself from getting different trends of HIV virus and also STIs (sexually transmitted infections) my responsibility is to PROTECT MYSELF, not for him.
His CHOICE will be to or not to have sex with me, (if I chose to tell him) and his RESPONSIBILITY is to use condom to PROTECT himself (not me) whether he know my status or not.
I think this is pretty clear and my post is also aiming to reflect this point. And I am sure most of the reader understands it.
You might consider or think this is immoral but if you have studied human rights or even just basic rights you will understand.
Because we cannot be sure about knowing or not knowing about someone who has HIV virus or not. Might be someone we wanna have sex is
1. has HIV and DO NOT wanna tell
2. has HIV but did not know about himself
3. has HIV and wanna tell but afraid will lose this sex partner then chose not to tell
So we will have to consider all of the above-mentioned factors to be RESPONSIBLE for ourselves. It is our COICE whether we will have sex with someone we DO NOT know about their HIV status.
I believe that Taung Paw Thar's concern is responsibility.
The best is if A who has positive must tell B that he / she has positive as it is A's responsibility. And then the rest is up to B.
(If A or B really doesn't know if he/she has positive, it will be fine and it is totally "choice".
Why is A need to tell, and why is A’s responsibility to protect B and why it is not B’s responsibility to protect himself. Answer yourself.
Do we really responsible for other people action that will affect our lives or we have our own responsibilities for our action (in this case as you mentioned to or not to have sex with someone we known or might not known) clearly it is our own CHOICE we are going to make, may be we know someone foralong time but we cannot expect that he will always tell him whatever happen with his life.
I believe that B won't have sex at all or must use condom and proper way if B chooses to have sex with A.
Human minds and behaviors are very complicated.
And let me tell you something here, I always tell someone even foracasual sex, one time sex before I have sex, I always told them about my HIV status BUT you might be amazed of7out of 10 people I told are NEVER refuse to have sex because of the HIV status, some even persuade me to have sex without condom telling me that they know the risk, of course I know my risk too which is I might get new trends of HIV virus from that and to protect myself from that kind of persuasion is my own RESPONSIBILITY)
Because if we have sex with strangers or someone we knows recently or long time, it is not 100% to get positive compared to having sex with the person who has positive.
That's why it is totally A's responsibility to tell B.
If A doesn't tell about it and make sex with B without condom, A must feel guilty if A has clear conscience.
The worst case is that A can be sued by B for not telling having positive as if B can trace back for having positive later. (This is what the HIV / AIDS specialists tell the HIV / AIDS patients.)
To answer your worse case scenarios how can we be sure that B is not lying about himself. A can also accuse that B infected him, or even as you said B get infected from A how are we gonna prove that, if you wanna sue someone you will needatangible prove and evidence. This is only so far from my limited knowledge.
Of course HIV specialist can tell the patient like this and he must coz this is his ethic to do so. But if you go to the court you need prove.
Hope you understand mine too.
June 3, 2011 10:09 AM
I feel sorry to know that you feel that way.
But I don't think I bias evenabit regarding this matter from any point of view including both society & medical.
From this sentence I am not sure but will assume that you are learning medical or at least familiar with it, but try to get more into human minds as well, and be realistic.
I just point out the A's responsibility and B's choice.
I think you are clear here. But not enough, A’s responsibility to protect himself which is use condom to prevent himself from getting different trends of virus, B’s choice is to or not to have sex with A (regardless A tell him he is HIV or not or whether A know himself or not) this is call universal precaution. If you are not sure about this you can check with your HIV specialist. :+) sorry have to beabit mischievous can’t help my bitchiness). And his own responsibility to protect himself and NOT expecting that A will be responsible for him.
There are at least two options IF we have to make choice.
But the choice will be totally different IF WE KNOW EXACTLY THE OUTCOME for what we are going to do.
The problem is we will NEVER know what the EXACT outcome is.
If we have clear conscience, we must bear responsibility for what we do and say.
We all know and aware that when it comes to sex there is not such thing as clear conscience.
So since A knows he/she has POSITIVE, it is A's responsibility to tell B no matter how B makes choice is nothing to do with A.
I'm now discussing from A’s side only as the topic of your article focused on A.
Familiarly if B has positive, B must tell A too.
These points are already answered above.
At the same time, A must use condom all the time to protect him/herself. Like what you said two positive patients can't do without protection as patient differs the virus differs and can cause the condition worst if combine different virus.
Hope you will see clear picture.
You can discuss with me every fact you can't agree.
Now I would like YOU and ALL READERS to choose ONE of the followings.
If A knows he/she has positive and before having sex with B,
1) A WILL TELL B about having POSITIVE and ask B to use condom and do in proper way.
2) A WON'T TELL B about it due to some reasons but try to protect him/herself & B by his/her own way by using condom and do proper way no matter how B is willing to use condom or not.
3) A WON'T TELL B and let him make choice for his own safety and just follow according to his choice of using or without using condom. (Because A thinks everybody must protect themselves so A doesn't have to tell about it.)
This is not our game to play or to choose it is for all those who wanna have casual sex to consider and take into account about their own CHOICE, RESPONSIBILITY and ACTION.
And I already had explainedalot above, A might or might not know, A might or might not tell, A chose to tell, A chose not to tell, etc etc .
DL (One of Homo)
I do give my apologies for being unable to use Burmese font at this moment as something wrong with software.
I can read Burmese font only but can't type.
I am waiting for your discussion of my comments at ဖိုးသူတော် နှင့် အမေးအဖြေ (ဒေါ်ရီတာ အား အလျင်အမြန်အတုခိုးခြင်း).
Actually my comments are for both ရွေးချယ်မှု (ကိုတောင်ပေါ်သားနှင့် ကြုံတုန်း) and ဖိုးသူတော် နှင့် အမေးအဖြေ (ဒေါ်ရီတာ အား အလျင်အမြန်အတုခိုးခြင်း).
I just love to discuss and share opinion only as you said you would get back later.
Posted by တီချမ်း at 5:53 PM4comments: Links to this post
ကဗျာ အမည် - စတယ်လာတာ
ကဗျာ အမျိုးအစား - ပန်းဖွဲ့ကဗျာ
ရေးသူ - စာဆိုတော် နန်းမတော် မိမိချမ်း
နွမ်းလေငြား မယ့်အိပ်ရာထဲ ထားခဲ့တယ်
လွမ်းနေမလား မောင်မောင်ဘတ်ဖို့ ပို့ခဲ့တယ်
မယ့်ကိုယ်စား မောင့်ကို စာလွှာဆွေးစိတ်ပြယ်။
ဆရာမ ဂျူး၏ ဝတ္တုခေါင်းစဉ် ကို ကဗျာ အစ စာကြောင်းအဖြစ် ယူသုံးထားပါသည်
Posted by တီချမ်း at 1:48 PM5comments: Links to this post
လမ်းအတူလျောက်တဲ့ စကားပန်း (သို့) စိတ်ကူးယဉ်ဆုတောင်း
နှစ်သစ်ကူးပြီဆိုတိုင်း လူတွေက မေးတတ်လေ့ရှိကြတယ်။ ဒီနှစ် အတွက် ဘာဆုတောင်းလဲ ဆိုတာလေ။ ဘာဆုတောင်းရမလဲနော်…..ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က မွေးနေ့တိုင်းမှာ ဖယောင်းတိုင် ထွန်းပြီး ကိတ်မုန့် နဲ့ ဆုတွေအများကြီးတောင်းခဲ့ဘူးတာပဲ ဘယ်တခုများ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့လို့ လဲနော်။
ကိုယ်ဆုတောင်းရတာ ကိုမယုံပါဘူး။ ဆုတောင်းတာကို မယုံတာ တခါတခါတော့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ။ ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ကိုယ်က ကျေနပ်လွယ်တယ်။ ရောင့်ရဲ လွယ်တာကိုပြတယ် နောက်ပြီးတော့ မယုံတော့ မတောင်း မတောင်းတော့ မမျှော်လင့်မိ မမျှော်လင့်မိတော့ တောင်းတဲ့ ဆု မပြည့် လို့ကြေကွဲရတာတွေ ခံစားရတာတွေ ဝမ်းနည်းရတာတွေ ဘာဆို ဘာမှ မရှိတော့ဘူးပေါ့။ မကောင်းလား…?
တခါက စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ ဘတ်ဘူးတဲ့ ဆိုက်ကိုတက်စ် တခု က ဒီလိုပြောတယ်။
တကယ်လို့သာ ကိုယ့်ကို အချိန်နောက်ပြန်ဆွဲခွင့်ပေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အရာ တခုခု ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်အရွယ်ကို သင်ပြန်သွားချင်သလဲ…. ဘယ်အရာ ကိုရောပြောင်းလဲချင်သလဲ…..တဲ့။ ဥပမာ ကိုယ် က အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကို ပြန်သွားမယ် ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ဝက်ခြံ မပေါက်ချင်ဘူးဆိုရင် ဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘဝ
တခုလုံးမှာ အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်က မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံ ပေါက်တာဟာ ကိုယ့် ကို စိတ် အနှောက်အယှက်အဖြစ်စေဆုံး ကိစ္စပါတဲ့။
ကိုယ်ဘယ်တုံးက မှ အဲ့လို ကာလတွေအဝေးကြီးခြားပြီး ဆုမတောင်းဖူးဘူး။ တောင်းပြီး မပြည့်လာရင် စိတ်ပျက်မိမှာစိုးလို့။ ကိုယ် ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆုမျိုးက လက်ငင်း သိနိုင်မယ့် အရာမျိုးပဲဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
ကိုယ့်အိမ်က မြေနီကုန်းဈေးလမ်းထဲမှာရှိတယ် အိမ်ဘေးကနေ ထွက်လိုက်တာနဲ့ ဦးဝိစာရ လမ်းကိုရောက်တယ်။ ရွှေလီလမ်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းပါ။ နည်းနည်းဆက်လျောက်လို်က်ရင် ဘလေဇုန် ရှိတဲ့ ချင်တွင်းလမ်းကိုရောက်တာပေါ့ အဲ့ဒီကနေ သံလွင်လမ်းတလျောက် ဟိုဘက် ကိုဆက် ထွက်လိုက်ရင် အင်းလျားလမ်း ကိုပေါက်ပါတယ်။ ဦးဝိစာရလမ်းအတိုင်းဆက်လာရင် ဟံသာဝတီအဝိုင်းနောက် လှည်းတန်း ကိုရောက်ပါတယ်။
အဲ့နေ့မနက်ကတော့ စိတ်ထဲမှာ လမ်းအရမ်းလျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ ဒီတခေါက် အိမ် ပြန်ခရီးက မောင်လဲမပါလာတော့ ကိုယ်နဲ့အတူ လမ်းလျောက်မယ့် အဖော်လဲမရှိဘူး။ အဲ့တာ နဲ့ပဲ လမ်းဝေးဝေးလျောက် လို့ကောင်းအောင် ကင်းဘတ် ဖိနပ်ကိုကောက်စီးပြီး ခုနက ပြောပြ တဲ့ ဒါရိုက်ရှင်အတိုင်း လှည်းတန်းဘက်ကနေ အင်းလျား ကန်ဘောင် ဘက်ကို လျောက်လာ လိုက်တယ်။
မိုးဦးမို့လို့ထင်တယ် ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ လူသိပ်မများပါဘူး။ ကိုယ်ထင်တာက အိမ်ကနေ ကန် ဘောင် အထိဆိုရင် တော်တော်မောမယ်ထင်ထားတာ။ တကယ်တမ်း ဖြည်းဖြည်းချင်းလျောက် လာလိုက်တော့လဲ သိပ်မမောပါဘူး။ လမ်းတလျောက်မှာတော့ ခွေးချီးတွေ တွေ့ရတယ်။ ခွေး ချီးတွေကို ရှောင်ရင်းရှားရင်း လျောက်ရတာလဲ တမျိုးတော့ ပျော်စရာကောင်းတာပါပဲ။
အပြန်ကျတော့ လာခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်း မပြန်ဘဲနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေဘက်ကနေ ပတ်ပြန်လာတယ်။
စကားပန်းပင်လေးတပင်တွေ့တယ်။ အပွင့်တွေကို ဝေလို့ သိပ်လှတာပဲ။ အဲတာနဲ့အပွင့်တပွင့် ကို ခူးခဲ့ပြီး လက်ကကိုင် လျောက်လာလိုက် တယ်။ (နည်းနည်းတော့ ကြောင်တာပေါ့ ပန်းပွင့် ကို လက်ကနေကိုင်ပြီး လမ်းလျောက်နေတာဆိုတော့….ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သိပ် စိတ်ကူးယဉ် တတ်တယ်လေ။ ပြီးတော့ လူတွေ ဘာထင်ထင်လဲ သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး။) ဒီလိုနဲ့ပဲ ပန်းပွင့်နဲ့ ကိုယ် တူတူ လမ်းလျောက်ကြတာပေါ့။
တလျောက်လုံး လူကလွဲရင် ခွေးတွေကပဲ လူတွေနဲ့ တူတူလမ်းလျောက်ထွက်လေ့ရှိတယ်လို့ ကိုယ်ထင်ထားတာ။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ကို ခြင်းနဲ့ ထည့်ပြီး လမ်းလျောက်တဲ့ မိန်းမ တယောက် ကို တွေ့ဘူး တယ်။ ခြင်းထဲက ကြောင်ကတော့ ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်ပြီး ရှက်လဲရှက် နေသလို ပါပဲ။ ကြည့်ရတာ ကြောင်က လျောက်ချင်ပုံလဲ မရပါဘူး။ အင်းလေ သူတို့ ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တူတူ လမ်းလျောက်နေတဲ့ ခွေးတွေက သူ့ကို ဟာသ လုပ်မှာစိုးလို့နေမှာပေါ့နော့။ ဘယ်တုံးကများ လူနဲ့ တူတူလမ်းလျောက်တဲ့ ကြောင်ရယ်လို့ ကြားဖူးလို့လဲ…?။
ဒီနေ့မနက်တော့ စကားပန်းကလဲ ကိုယ့်ကိုအဖော်ပြုပြီး လမ်းလျောက်နိုင်တာပါပဲလားလို့ ကိုယ်သိလိုက်ရတယ်။
စာရေးရင်းရေးရင်း တခါတခါ ဘာရေးရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်စာဘတ်တဲ့သူတချို့က ကိုယ်ဟင်းချက်တာရေးတာကြိုက်တယ်၊ တချို့ က အမြင်မတော်တာတွေ ခလောက်တာမျိုး ကြိုက်ကြပြန်ရော်။ တချို့ကျပြန်တော့ ကိုယ်ဟာသတွေရေးတာကြိုက်တယ် အဲ့တာနဲ့ ကိုယ်လဲ တခါတခါ ဘာရေးရမှန်းမသိခမ်းကုန်တတ်ပါတယ်။
လမ်းထွက်လျောက်ခါနီးတုံးက လမ်းလျောက်ရင်းနဲ့ ဘာရေးရရင်ကောင်းမလဲလို့ စိတ်ကူးမယ် လို့ မျှော်လင့်ထားတာလေ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်မှ လမ်းလျောက်နေတုံးက ကိုယ်ဘာဆို ဘာကိုမှ မစဉ်းစားနေခဲ့မိတာကို သတိရတော့တယ်။
လမ်းလျောက်နေတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီးတော့ ရေးစရာ ကုန်ကြမ်း စဉ်းစားလို့ ရပါစေဆိုပြီး အိမ်ကနေ မထွက်ခင်က ဆုတောင်းခဲ့တာလေ။
Posted by တီချမ်း at 5:33 PM 11 comments: Links to this post
ကဲ တနေ့က ခေတ်သစ်ယောက်ျားရေးပြီးတော့ စာဘတ်သူတယောက်က ပြောလာတယ်။ ယောက်ျားတွေ အကြောင်းပဲ မကောင်းရေးတာ တဘက်သတ်ဆန်နေသလားပေါ့။ ရှုထောင့်က တဘက်သတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ ကဲ အဲ့တော့ ခေတ်သစ်မိန်းမတွေ အတွက်လဲ ကိုယ့်အမြင်ကိုရေးပါအုံးမယ်။ ခေါင်းစဉ် ကိုသေချာကြည့်ပါ သူတို့ ခေတ်သစ်မိန်းမတွေ လို့ရေးထားပါတယ် ကိုယ်မပါပါဘူး။ ခုတော့ ကိုယ်က လင်းနို့ ဖြစ်သွားပြီ၊ ကုန်းသတ္တဝါတွေ နဲ့ ရေ သတ္တဝါတွေ စစ်ဖြစ်ကြတော့ ဘက်ရွေးတဲ့ လင်းနို့ တွေ အကြောင်း ကြားဖူးတယ်မှလား။ ကိုယ်က ကမ္ဘာသားပါ အဲ့တော့ မားစ်နဲ့ဗီးနပ်စ် ကြားမှာပဲနေပါတယ်။ ဗီးနပ်စ် က ကိုယ့်အတွက် ပူလွန်းသလို မားစ်ကလဲ ကိုယ့်အတွက် အေးလွန်းပါတယ် အဲ့တော့ ကိုယ်က မစ္စိမ ပဓိပဓာ ပဲ လုပ်မယ့် ကမ္ဘာသား တဖြစ်လဲ လင်းနို့ပေါ့လေ။ ငှဲငှဲ တစ်တီတူးတွေ တောက်တဲ့တွေ တော်တာ တီတီ တော့ အပျော့ .....
ထားပါတော့ ကဲ စမယ် ရယ်ဒီ....................................အက်ရှင်.......................
ဟိုးအရင်ခေတ်က မိန်းမတွေဆိုရင် ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ ဖြစ်ရမယ်၊ အပျိုစင်ဘဝ ကိုတန်ဖိုးထားရမယ်။ သားကိုသခင် လင်ကိုဘုရား လိုသဘောထားရမယ် လို့ ကိုယ်တို့ အရှေ့ တိုင်းတွေမှာ သင်ယူ နာကြားကြီးပြင်းကြရပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ အနောက်မှာ ဆိုလဲ စတက်ဖို့ မယားလို့ ခေါ်တဲ့ စံ မယားတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင် လက်ထက် က အမရာ ကိန္နရီ မဒီ တင်ဇာမော် အေးချမ်းမေ လေးလေးဝါး အဲလေ ရောကုန်ပြီ....ထားပါတော့...
ဟော အဲ့လို အတွေးအခေါ်တွေ နဲ့ ကြီးပြင်းကြရသလို စိတ်ထားကလဲ စိတ်ရှည်ရမယ် သည်းခံ ရမယ် ရက်ရောရမယ် နူးညံ့ ရမယ် စတဲ့ သင်ကြားပြသမှုတွေ ရှိသေး။ အမေ့ ရဲ့ အမေက အမေ့ကို အမေက သူ့သမီးကို ဆင့်ကဲဆင့်ကဲပေါ့လေ။
မိန်းမကောင်းဆိုတာ စိတ်ပုပ်စိတ်ယုတ်မရှိရဘူး ကိုယ့်လင် ကိုယ့်သား ကိုယ့်မိသားစု စိတ်ချမ်းသာမှု ကိုသာရှေးရှုရမယ်စသဖြင့်ပေါ့။ မိန်းမကောင်းဆိုတာ တတ်သိလိမ္မာရမယ်၊ အပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းရမယ်၊ နှုတ်မကြမ်းရဘူး ၊ အလှအပ ကိုလိုတာထက်ပိုမမက်ရဘူး၊ ကလက်တက်တက်မနေရဘူး၊ ရွယ်တူ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကစားခုန်စားက အစ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ရမယ်၊ ဒူးထောင်ပေါင်ကားမနေရဘူး၊ မိန်းမပျင်းခြေဆင်း ယောက်ျားပျင်းကျောခင်း၊ မိန်းမကောင်းဆိုတာ ထိုင်ရင်တောင် ခြေဆင်းမထိုင်ရဘူး၊ (ဘုရား ကိုယ်တော်တော်သိတာပါလား) စတာတွေက အပျိုဘဝမှာ တော့ အသေးအဖွဲတွေပါ
နောက်တော့ ရှိသေးတယ် အိမ်ထောင်မှုနိုင်နင်းရမယ် တချိန်ထဲမှာလဲ ယောက်ျားတွေကို ကျိုးနွံရမယ်၊ နာခံရမယ် သစ္စာစောင့်သိရမယ် (မှတ်ချက် ယောက်ျားတွေ မိန်းမ တယောက်ထက်ပိုယူတာကျတော့ တရားဥပဒေတော်တော်များများက လက်ခံကြပါတယ် မိန်းမက ယောက်ျားတယောက်ထက်ပိုယူမိရင် အဲ့တာ မိန်းမပျက်ပဲ) ထားပါတော့...ရှိသေးတယ် ယောက်ျားပြောတာက သာအမှန်၊ ယောက်ျား အမြင်ကသာ လက်ခံဖွယ်ရာ မိန်းမတယောက်ကများ မတော်တဆ အမြင်လေးရှိမိရင် အဲ့ဒီမိန်းမဟာ အင်မတန်လျှာရှည်သော မိန်းမ။ ဖောက်ပြန်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ယောက်ျား ကို မိခင်တွေကိုယ်တိုင် ကိုက “သည်းခံပါ သမီးရယ်.....တခါလောက်တော့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ၊ သူက အိမ်ထောင်ဦးစီးမှလား၊ ကိုယ့်ယောက်ျားကို ကိုယ်လေးစားမှပေါ့၊ မိန်းကလေး ဆိုတာ သေစာရှင်စာလောက် တတ်ရင်တော်ပြီလေ” ဒီလိုစကားတွေ ကိုယ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မီးခိုးတွေ မွှန်နေသလို ပလုတက်ဖြစ်နေတာ ကြာပေါ့။ ကြားဖူးကြရဲ့မှလား။
မိန်းမကောင်းတယောက် အတွက် ဘဝမှာ “အကြီးမားဆုံးပန်းတိုင်” ကယောက်ျားကောင်းတယောက်ရဖို့၊ မယားကောင်းတယောက်ပီသဖို့၊ မိခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ စတာတွေပဲ။ ပြီးတော့ အဲ့ယောက်ျား က မကောင်းရင်တောင် သည်းခံပြီး ဆက်ပေါင်း ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုးလေ။ လင်မရှိသောမိန်းမသည် မောင်တကျိပ်ပင်ရှိလင့်ကစားမတင့်တည် ဆိုတဲ့ ဟာကို ဟုတ်သည်မဟုတ်သည် ဘုရားက ပြောပါတယ် လျောက်ပြော။ ဘာသက်သေမှမရှိ။ ရှေးခေတ်လူကြီးတွေ သိပ်ခက်တယ်။ အရင်ခေတ်ကတည်းက မိန်းမကောင်းသည် ငါဆိုတာ မရှိရ၊ အရာရာ အစစ သည် ငါ့လင် ငါ့သား ငါ့မိသားစု သာလျှင်ဦးစားပေးဖြစ်ရမည်။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့် အတွေ့အကြုံ ကို နည်းနည်းပြောချင်သေးတယ်။ မှတ်မိသေးတယ် ကိုယ်လေးငါးတန်းထိ ကျောင်းမှာ အမေ့ အလုပ်အကိုင်ဆိုတာ ကို အမြဲလိုလို အတန်းငယ်ငယ်ကတည်းက “မှီခို” လို့ ဖြည့်ရတာကို သိပ်သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး။ အဲ့အချိန်မှာ ဖေဖေ က အငြိမ်းစား ယူနေပါပြီ အဲ့တော့ အိမ်မှာဆိုရင် ဖေနဲ့ မေ တူတူပါပဲ ဆိုလိုတာ ဘယ်သူမှ အပြင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလေ။ သို့သော် ကျောင်းနဲ့ ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းတွေဖြည့်တိုင်း ဖေ့ကိုတော့ ဗိုလ်မှုး(အငြိမ်းစား) လို့ဖြည့်ရပြီးတော့ မေ့ကို မှီခိုလို့ဖြည့်ရတာ ကိုယ်ဘဝင်မကျပါဘူး။ မေ လုပ်နေရတာတွေ အိမ်မှာ နည်းတာမှ မဟုတ်တာ သို့သော် မေကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလိုပါပဲ။
နောက်ရှိသေးတယ် အိမ်မှာ က အရင်ကတည်းက ဖေ အလုပ်လုပ်ကတည်းကလဲ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ချက်စားကြရတာပါ ကြက်သားချက်ရင် အသားတတုံး အရိုးတတုံး ဘဲဥ ချဉ်ရည်ဟင်းဆိုရင် မနက် ည တခြမ်းစီ သို့သော် ဖေကတော့ အမြဲ ခြွင်းချက် ကြက်သားဆိုရင် အမြဲ ပေါင် ရင်အုံ စသဖြင့် မေ က ဦးစားပေးတတ်သလို ဘဲဥ ဆိုလဲ တလုံး။ ကိုယ့်ကိုလဲ မေက အငယ်ဆုံးလေး ဆိုပြီး (မွေးစားသားပေမယ့် အရင်းတွေနဲ့မခြား) အမြဲ ပိုကျွေးတတ်ပါတယ်။ မေကိုယ်တိုင်တော့ အရိုးအရင်း အိုးလူးဆီလူးနဲ့ပဲ ပြီးလိုက်တာ၊ အမအိမ်သွားလည်တော့လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း။ ဒါမျိုးတွေ ရေးနေတာ ဘတ်ရတောင်ပျင်းပါသေးတယ် သူများတွေလဲ တော်တော်များများ ရေးဖူးနေပြီးသားပါ။ တကယ်လဲ မြန်မာ့ ကာချရယ်မှာ အိမ်တော်တော်များများ က အဲ့လို ကြုံဖူးကြမှာပါ။
သုို့သော် ကိုယ်ပြောချင်တာ က ဘာ့ကြောင့်များ မိန်းမတွေကို ယောက်ျား ကို ဦးစားပေးရမယ် ယောက်ျား ကို ရိုသေရမယ် လို့ မိန်းမတွေကို မိန်းမတွေကပဲ (အဖွားတွေအမေတွေက) အစဉ်အဆက် သင်ပေးခဲ့လဲ။ သေချာတာကတော့ သူတို့ကို ဟိုးကနဦး အစမှာ သင်ပေးတာကတော့ ယောက်ျားတွေပဲ ဖြစ်ရမယ် လို့ ကိုယ် ကလန်ကဆန်လုပ်တွေးတွေးနေမိပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ ခပ်ထက်ထက် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တယောက်သောသူက ပြောတယ်။ သူ့ကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ သူ့အဖေ က ရေလည်နှိပ်ကွပ်တယ်ဆိုပဲ။ သူ့အဖေက ပြောတယ်တဲ့ “ညည်းတော့ ကြပ်ကြပ် လျာရှည် တနေ့ ယောက်ျား ရမှာ မဟုတ်ဘူး” ဆိုပဲ။ သူ့အဖေ အမြင်မှာ မိန်းမ ဆိုတာ “အမြင်” မရှိရဘူး။ ယောက်ျားပြောတာ နားထောင် ယောက်ျား ပြောတာပဲ လုပ် ယောက်ျားပြောတာ အဟုတ်ထင်။ အဲ့တာမှ မိန်းမကောင်းပီသမှာဆိုပဲ။ သူ့မိန်းမ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအမေလိုပေါ့ အရုပ်လိုဖြစ်လေ သူတို့ မဟာ့မဟာ ယောက်ျားတွေပိုကြိုက်လေပဲ။ သူ့အဖေ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မိန်းမကောင်းဆိုတာ အမြင် သိပ်မရှိရဘူး၊ အိုပီနီယံ မရှိရဘူး ဆိုတာကိုး။ နီခ်ကိုး ရဲ့ စတက်ဖ်ဖို့ထ် မယား ရုပ်ရှင် ကိုတောင်သတိရသေး ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ မဟာ ပူရိသ တွေ က ရီမုဒ်ကွန်ထရိုး နဲ့ လာတဲ့ မိန်းမ ရရင် လိုချင်မှာ.......စက်ရုံတွေက မထုတ်သေးလို့ တကယ်ပြောတာ
အခုတော့လဲ ခေတ်တွေကပြောင်းလာ အချိန်တွေက ပြောင်းလာတော့ ဟိုတနေ့ က ပိုစ့်မှာ ပြောသလို ခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ ရှိလာရင် သူတို့ ခေတ်သစ် ယောက်ျားတွေ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် ကိုယ်တို့ (အဲလေ ကို်ယ်မပါဘူး) မယ်တို့ ခေတ်သစ် မိန်းမတွေလဲ လိုအပ်လာတာပေါ့။
ခေတ်သစ်မိန်းမတွေရဲ့ အရောင်တောက်မှု က ယောက်ျားစကား ဘယ်လောက်နားထောင်တယ်ဆိုတာ ကို မူတည်ပြီး မခွဲတော့ဘူး၊ မှီခို ဆိုတာထက် ကိုယ်တို့ က ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို အစားထိုး သုံးလာကြပြီ။ ကိုယ်ရှာတာ မှ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ဆိုတာ ကို သဘောပေါက်လာကြပြီ (ဥပမာတွေလဲ ရှေ့မှာ ရှိထားကြတာကိုး)
ခုခေတ်မှာ ယောက်ျားတွေက ရှာတာလောက်နဲ့ အိမ်ထောင်တခု က မလောက်ငှတော့ဘူး။ အရင်ခေတ်ကလို ဖေ့ လုပ်စာနဲ့ မိသားစု ၈ယောက် ၁၀ ယောက်စားရင် ကန်စွန်းရွက်တောင် အနပ်မှန်ဖို့ မသေချာတော့တဲ့ခေတ်။ အရင်ခေတ်က ဘဲဥ ဆိုတာ ဆင်းရဲသားတွေစားတာ အခု သူဌေးတွေစားတာ၊ အဲ့တော့ မိန်းမတွေလဲ အလုပ်ထွက်လုပ်မှ ရတဲ့ခေတ်။ အဲ့ကနေ ကိုယ်တို့ အားတွေဖြစ်လာတယ်၊ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးစိတ်တွေ ထွက်လာတယ်ဆိုပါတော့။
နောက်တခုက တရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ် ဆိုသလို တလင်မပြောင်း တပါးမပြောင် (တီချမ်း ဆိုးရိုးအသစ်ဖြစ်ပါသည် မူပိုင်ခွင့် နဲ့ တောင်းသုံးရန်) မဟုတ်သေးရင်တောင် ကိုယ့် အပေါ်မကောင်းတဲ့ သူကို သမီးရယ် တည်ပြီးတဲ့ အိမ်ထောင် မပျက်ပါစေနဲ့ ဆိုပြီးသည်းခံ ပေါင်းတဲ့ ခေတ်ကလဲ လုံးလုံး မကုန်သေးရင်တောင် ခေတ်နှောင်းရောက်နေပါပြီ။ ကိုယ့် ချစ်တဲ့ သူနဲ့ အတူနေရဖို့ ကသာ အဓိက မှလား မကောင်းတဲ့ ယောက်ျား ကို တခုလပ် မဖြစ်ချင်လို့ မကွာဘဲဆက်ပေါင်းမယ်ဆိုတာ တကယ်လားမေးရင် အင်းလို့ ဖြေမှာ လူနည်းစုပါ။
ဒီခေတ်မှာ ကျားကျား မမ ပြားပြား ကွဲကွဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး သို့မဟုတ် ကိုယ့်အတွက် ပဲ ကိုယ်ကြည့် ဆိုတဲ့ အတ္တ ဦးစားပေး ပဓာန ဝါဒ ခေတ်ဦး ကိုရောက်နေပါပြီ တခြားမကြည့်နဲ့ တာဝန်ယူမှု ကိုကြောက်လို့ ကလေးမယူတော့ တဲ့ စုံတွဲက အများစု။ ပါးစပ်တပေါက်ကျွေးရတာ ကျားမြီး ဆွဲရတာထက်ခက်နေပြီ။ ခုခေတ် ခေတ်သစ်မ်ိန်းမတွေက အိမ်ထောင်မပြုဘူး ယောက်ျားမယူဘူး ကလေးမယူဘူး ကိုယ့် အောင်မြင်ရေး ကိုအရင်လုပ်အုံးမယ် ဆိုတာ အများစုပါ။ ဟုတ်တယ်လေ ယောက်ျားတွေက လောက်လောက်လားလား အားကိုးစရာဖြစ်တဲ့ ခေတ်က ကုန်ပြီကိုး။ မိမိကိုယ်သာ အားကိုးရာမှလား ဘုရားပဲ ဟောထားတာ။ ကဲ။
ခေတ်သစ်မိန်းမတွေက ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်သလို ကောင်းကောင်း သုံးရမယ် ဆိုတာလဲ သိနေပြီ။ အရင်လို သားအတွက် လင်အတွက် ကိုယ်က အိမ်ထဲက မီးဖိုချောင်ထောင့်မှာ အိုးမဲ ပေပေရေရေ နဲ့ နေတဲ့ခေတ်ထက် ဂူချီမျက်မှန် ပရာဒါအိတ် နဲ့ ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ခေတ် ရောက်နေပြီ။ ကိုယ်ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ ဖြစ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ မဖြစ်တော့ရော ဘာအရေးလဲ အရင်ကလဲ ကိုယ်တွေက ယောက်ျားတွေ ရှာတဲ့ ပိုက်ဆံ သုံးခဲ့တယ် ခုလဲ ဆက်သုံးတယ်ပေါ့။ စိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါနော့်။တီချမ်း မဟုတ်တာတွေ သင်နေပြန်ပါပြီ။
ခေတ်သစ်မိန်းမတွေက ဖောက်ပြန်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ယောက်ျား ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ပြန်ပေါင်း ဖို့ ဆိုတာထက် ရှေ့နေ နဲ့ အမိဖမ်းပြီး ကွာပစ်မှာ။ ခေတ်သစ်မိန်းမတွေက ကုမ္ဗဏီ ညစာစားပွဲကိုတယောက်ထဲ တက်လဲ တင့်တယ်နေပြီ။ စီးပွားရေး ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲ ယောက်ျားတွေ နဲ့ တန်းတူ စကားပြောနေနို်င်ပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေကြပြီ ဦးဆောင်နေကြပြီ။ ခေတ်သစ်မိန်းမတွေမှာ တယောက်ထဲ ညဘက်ထွက်ရင်မသင့်တော်ဘူးဆိုတာထက် ကို ကို်ယ်ပိုင် ဆိုရှယ် နက်ဝေါ့ ရှိလာပြီ (ဖဘ တွေခေတ်စားနေတဲ့ ခေတ်မှာ ဒီလိုပဲရေးရပါမယ်)
ပြောရရင်တော့ မီးဖိုချောင်ဆိုတဲ့ အိမ် “ထောင်” ထဲက ရှင်လိင်ပြန်လာပြီပေါ့လေ။
ခေတ်သစ်မိန်းမတွေက နောက်တခု ဘာကို သေသေချာချာ သိသေးလဲဆိုတော့ ခေတ်သစ်မိန်းမတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ရာဟာ ဦးတည်ချက်ဟာ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်းဟာ အရင်ခေတ်ကလို “ယောက်ျား ကောင်းရရေး” မဟုတ်တော့ဘဲ “ယောက်ျားတွေရဲ့ အောက်ကျ နောက်ကျ လက်ဝေခံ မဖြစ်ရေး” ဖြစ်နေပြီဆိုတာပါပဲ။
ကဲ စိတ်ကြိုက်သာ ဆဲကြပေတော့....
Posted by တီချမ်း at 2:59 PM 20 comments: Links to this post